၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင်ရာသီဥတုဒုက္ခသည်သန်းနှင့်ချီ။ ရှိလိမ့်မည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရင်ဆိုင်ရမည့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမလွယ်ကူပါ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးရှင်သန်ရပ်တည်ရန်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းမှာပြောင်းရွှေ့အခြေချခြင်းဖြစ်သည် အစဉ်အမြဲသင့်နေအိမ်ဖြစ်ခဲ့တာ၏။
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့နှင့်မီသိန်းကဲ့သို့သောအခြားဓာတ်ငွေ့များသည်သူတို့ထက်များများမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှအပူချိန်မြင့်တက်လာပြီးနေ၏ရောင်ခြည်များသည်ကမ္ဘာ့ထောင့်အမြောက်အများကိုရေနည်းနည်းဖြင့်စွန့်ပစ်သည်။ ဒီအခြေအနေမှာ လူသန်းပေါင်းများစွာကိုရာသီဥတုဒုက္ခသည်အဖြစ်အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေလိမ့်မည်.
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်က၊ ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းခံရမှုစောင့်ကြည့်ရေးစင်တာနော်ဝေဒုက္ခသည်ကောင်စီမှ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လူ ဦး ရေ ၁၉.၃ သန်းသည်အိမ်များကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြရသည် ထိုကဲ့သို့သောဟာရီကိန်းသို့မဟုတ်မိုးခေါင်မှုကဲ့သို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားနိုင်ငံများသို့သွားသောသူများသည်ယခင်တိုက်ကြီးကဲ့သို့လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာကိုရှာဖွေကြသည်။
ဆီးရီးယား၂၀၀၆ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း၊ မကြာသေးမီကသမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးမိုးခေါင်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကြီးများကြောင့်လူနှစ်သန်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ဒီအခြေအနေကအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေကြောင့်ဆီးရီးယားလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကနေထွက်ခွာလာကြရတယ်။
ယခုနှစ် 2050 အတွက်, ကျနော်တို့ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းသည်နွေရာသီတွင်အလွန်ပူပြင်းလာလိမ့်မည်။ ည၏အပူချိန်မှာ ၃၀ ºစင်တီဂရိတ်နှင့်ºရာစုအကုန်ပိုင်းတွင်º ၅၀ ºစင်တီဂရိတ်တွင်ရှိသောနေ့º30ºC will ဖြစ်လိမ့်မည်။
တန်ဖိုးအရှိဆုံးကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သောရေသည်စစ်ပွဲအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်လာလိမ့်မည် အနာဂတ်မှာ။ အာဖရိကမှာငါတို့မြင်နေရပြီ နှစ်စဉ်သန်းနှင့်ချီသောလူတို့သည်သန့်ရှင်းသောရေမရှိခြင်းကြောင့်သေဆုံးကြသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ခန့်မှန်းချက် » ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင်ရာသီဥတုဒုက္ခသည်သန်းချီ။ ရှိမည်